ချွန်ထက်သောခြေချောင်းလွှာမြင့်ဖိနပ်အမျိုးသမီး Pumps | WoopShop®
ခြေချောင်းပါးပါး ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် အမျိုးသမီး Pumps
$41.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $61.99
9511-A17-ပန်းရောင် 7.5 စင်တီမီတာ
9511-17-blue10.5cm / ၃၇9511-17-blue10.5cm / ၃၇9511-17-blue10.5cm / ၃၇9511-17-blue10.5cm / ၃၇9511-17-blue10.5cm / ၃၇9511-17-blue10.5cm / ၃၇9511-17-blue10.5cm / ၃၇9511-17-blue10.5cm / ၃၇9511-17-gray10.5cm / ၃၅9511-17-gray10.5cm / ၃၅9511-17-gray10.5cm / ၃၅9511-17-gray10.5cm / ၃၅9511-17-gray10.5cm / ၃၅9511-17-gray10.5cm / ၃၅9511-17-gray10.5cm / ၃၅9511-17-gray10.5cm / ၃၅9511-17-yellow10.5cm / ၄၁9511-17-yellow10.5cm / ၄၁9511-17-yellow10.5cm / ၄၁9511-17-yellow10.5cm / ၄၁9511-17-black10.5cm / ၃၅9511-17-black10.5cm / ၃၅9511-17-black10.5cm / ၃၅9511-17-black10.5cm / ၃၅9511-17-black10.5cm / ၃၅9511-17-black10.5cm / ၃၅9511-17-black10.5cm / ၃၅9511-17-black10.5cm / ၃၅9511-17-black10.5cm / ၃၅9511-17-black10.5cm / ၃၅9511-17-blue10.5cm / ၃၇9511-17-blue10.5cm / ၃၇9511-A17-white7.5cm / ၃၉9511-A17-white7.5cm / ၃၉9511-A17-white7.5cm / ၃၉9511-A17-white7.5cm / ၃၉9511-A17-white7.5cm / ၃၉9511-A17-white7.5cm / ၃၉9511-A17-yellow7.5cm / ၃၅9511-A17-yellow7.5cm / ၃၅9511-A17-yellow7.5cm / ၃၅9511-A17-yellow7.5cm / ၃၅9511-A17-yellow7.5cm / ၃၅9511-A17-yellow7.5cm / ၃၅9511-A17-yellow7.5cm / ၃၅9511-A17-yellow7.5cm / ၃၅9511-A17-yellow7.5cm / ၃၅9511-A17-yellow7.5cm / ၃၅9511-17-gray10.5cm / ၃၅9511-17-gray10.5cm / ၃၅9511-A17-Gray7.5cm / ၃၅9511-A17-Gray7.5cm / ၃၅9511-A17-Gray7.5cm / ၃၅9511-A17-Gray7.5cm / ၃၅9511-A17-Gray7.5cm / ၃၅9511-A17-Gray7.5cm / ၃၅9511-A17-Gray7.5cm / ၃၅9511-A17-Gray7.5cm / ၃၅9511-A17-Gray7.5cm / ၃၅9511-A17-Gray7.5cm / ၃၅9511-A17-white7.5cm / ၃၉9511-A17-white7.5cm / ၃၉9511-A17-white7.5cm / ၃၉9511-A17-white7.5cm / ၃၉9511-A17-blue7.5cm / ၄၁9511-A17-blue7.5cm / ၄၁9511-A17-blue7.5cm / ၄၁9511-A17-blue7.5cm / ၄၁9511-A17-black7.5cm / ၃၅9511-A17-black7.5cm / ၃၅9511-A17-black7.5cm / ၃၅9511-A17-black7.5cm / ၃၅9511-A17-black7.5cm / ၃၅9511-A17-black7.5cm / ၃၅9511-A17-black7.5cm / ၃၅9511-A17-black7.5cm / ၃၅9511-A17-black7.5cm / ၃၅9511-A17-black7.5cm / ၃၅9511-A17-red7.5cm / ၃၅9511-A17-red7.5cm / ၃၅9511-A17-pink7.5cm / ၃၅9511-A17-pink7.5cm / ၃၅9511-A17-pink7.5cm / ၃၅9511-A17-pink7.5cm / ၃၅9511-A17-pink7.5cm / ၃၅9511-A17-pink7.5cm / ၃၅9511-A17-pink7.5cm / ၃၅9511-A17-pink7.5cm / ၃၅9511-A17-pink7.5cm / ၃၅9511-A17-pink7.5cm / ၃၅9511-A17-blue7.5cm / ၄၁9511-A17-blue7.5cm / ၄၁9511-A17-blue7.5cm / ၄၁9511-A17-blue7.5cm / ၄၁9511-A17-blue7.5cm / ၄၁9511-A17-blue7.5cm / ၄၁9511-A17-red7.5cm / ၃၅9511-A17-red7.5cm / ၃၅9511-A17-red7.5cm / ၃၅9511-A17-red7.5cm / ၃၅
ချွန်ပြီး ခြေချောင်းပါးပါး အမျိုးသမီး ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် - 9511-17-blue10.5cm / 36 backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
pump အမျိုးအစား: အခြေခံ
ဖနောင့်အမျိုးအစား - ပါးလွှာသောဒေါက်
ဒေါက်မြင့်: စူပါအမြင့် (၈ စင်တီမီတာ)
ဖက်ရှင် Element: Shallow
ပိတ်သိမ်းမှုအမျိုးအစား - ချော်လဲခြင်း
အမျိုးသမီးများအတွက် Pomps အရွယ်အစား
အီးယူ / CN အရွယ်အစား
မှတ်ချက်- ဖိနပ်များ၏ အရွယ်အစားတံဆိပ်သည် ဥရောပအရွယ်အစားမဟုတ်သည့် တရုတ်အရွယ်အစားကို ပြသထားသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် သင်မှာယူသော ဥရောပအရွယ်အစားနှင့် အတိအကျတူညီပါသည်။ သင့်ကွန်ပြူတာမော်နီတာပေါ်ရှိ အရောင်များသည် ထုတ်ကုန်အစစ်အမှန်အရောင်များနှင့် အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် သင့်မော်နီတာဆက်တင်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဒီတံဆိပ်ကို ကြိုက်တာကြာပြီ၊ Tao နဲ့ မှာထားတာ။ ဖိနပ်များသည် Bigtree တွင် အရာအားလုံးကဲ့သို့ ပြေပြစ်သည်။ အရွယ်အစား 37 သည် ဥရောပသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ 37 ငါ့ခြေထောက်က ကျဉ်းတယ်၊ လက်မက ရှည်တယ်၊ ခြေဖဝါးရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်က မတူဘူးဆိုရင်တော့ ပိုကြီးတဲ့ အရွယ်အစားကို ယူတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ခြေဖနောင့် အမြင့်သည် အလုပ်အတွက် ကောင်းသည်၊ လမ်းလျှောက်ရန်၊ ခြေထောက်သည် မပင်ပန်းရပါ။
ဖိနပ်တွေက အရမ်းကောင်းတယ်။ ငါ 7.5 စင်တီမီတာခြေဖနောင့်ယူထား။ ကျွန်တော့်မှာ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ခြေဖဝါး ၂၃.၇ စင်တီမီတာ ရှိပါတယ်။ ခြေထောက်က ကျယ်တဲ့အတွက် ၂၄.၅ စင်တီမီတာ ယူတယ်။ စုံလင်စွာထိုင်ပါ။
ဒီနေ့ရောက်ပြီး အရမ်းလှပေမယ့် ဆိုဒ်သေးသေးလေးဝယ်ထားတော့ ထပ်အော်ဒါတင်ထားပေမယ့် ပုံထဲကအတိုင်းပါပဲ။
ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ အလွန်စိတ်ကျေနပ်မှု၊ Novosibirsk သို့ အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း။ ကောင်းကောင်းထုပ်ပိုးပြီး ဘဝမှာ ၃၆-၃၇ ဝတ်တယ်၊ ၃၇ (ပေ ၂၃၊၅) နဲ့ လိုက်ဖက်ပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ဖိနပ်ကို ယူခဲ့တယ်။ ကျဉ်းမြောင်းလာခြင်း၊ အစုံအလင်ပါရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! အကြံပြုပါ။
ဒါတွေက ဖိနပ်မဟုတ်ဘူး - ဒါက ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်!!! အရည်အသွေးက အရမ်းကောင်း!!! ပြီးပြည့်စုံသောဖိနပ် !!! အရမ်းအဆင်ပြေတဲ့ဖိနပ်!!! 26 cm မှာ 43 တရုတ်ယူခဲ့တယ် - ခြေထောက်က သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ပျော်စရာကောင်းတယ်။ အကြံပြု!!!